Ukumema, indawo ebanzi kwaye eqaqambileyo ye-3.5 yegumbi leholide (i-maisonette) eneendawo ezimbini ezintle ezinelanga / ibhalkhoni enombono weentaba, ihlathi kunye nemithi yeKrisimesi. Ikhitshi langoku, elivulekileyo elinotshintsho kwindawo yokuhlala kunye neyokutya. Amagumbi amabini okulala aneebhedi ezimbini. Ishawara e-1x, indlu yangasese, isinki kunye nebhafu yeshawari eyi-1x, indlu yangasese, isinki. okanye ukuba kukho abantu abaninzi, i-attic ingaqeshwa ngabantu aba-3-7. Oku kunokufikelela ngeflethi yeholide okanye, ngolungiselelo, ngendlu yam.
ukuya kuthi ga kwi-2 abantu 60.--/ umntu ngamnye owongezelelweyo 20.--
Le inekhitshi kunye nezixhobo zococeko.Kwakunye nesitovu sokhuni sokufudumeza (ndibonelela ngokhuni, oku kuya kufuneka kugalelwe kwakhona kwaye kutshiswe nguwe.) Oku kunokusetyenziswa kwigumbi leeholide
Umnini, uLisbeth, uhlala kwisakhiwo esiphambili kunye nezilwanyana ezininzi (iigusha, iinkukhu, amadada, iifudo, iikati) kunye nothando oluninzi lwendalo. Wenza iimveliso zendalo ezahlukeneyo kunye neempahla ezenziwe ngamaplanga. Wamkelekile ukuba uzivumele ukuba uhendwe kukuyonwaba kwe "Hoflädel"i. ULisbeth unolwazi olukhulu ngezityalo nezilwanyana kwaye wonwabe kakhulu ukukuxelela ngayo okanye ukukubonisa kwindawo ekufutshane.
- Izilayidi zeflethi
- Itafile yetafile yabantwana, i-wardrobe yeempahla, njl.
-Ibhafu kunye nezongezo zeshawari
- Isitulo umqamelo balcony
-Iipani ezikumgangatho ophezulu kunye nezixhobo zokupheka, kunye ne-oven ene-steamer
-Idishwashi enedrowa yokusika (zivula ngokuzenzekelayo xa inkqubo iphela)
-Iswekile, ityuwa, iviniga, ioyile, imifuno entsha,
- Isipho esamkelekileyo: 1L. Ubisi, ibhotolo, jam, isonka isidlo sakusasa lokuqala, - - Dinner Small (i-spaghetti kunye nesosi yetumato yasekhaya), - - Ezahlukeneyo - Imidlalo yeBhodi kunye nethala leencwadi elincinci labancinci nabadala.
- elinye igumbi elikhulu linokuqeshwa kumgangatho ophezulu, odityaniswe nendlu ngomnyango kwaye unikezela ngeenketho zokulala ze-2-7 kunye nendawo eninzi yemidlalo kunye nokuzonwabisa. Eli gumbi nako ukufudunyezwa kunye nostalgic isitovu iinkuni (ngobusuku ezongezelelweyo CHF 60.- ukuya kubantu 2, umntu ngamnye owongezelelweyo CHF 20.--./ umrhumo wokucoca CHF 50.--/ igumbi ikhitshi, yangasese , Lavabo, ishawari (a ukufikelela eyahlukileyo icetyelwe)
- I-Whirlpool (i-jacuzzi) yokusetyenziswa kuphela, ireyithi eyongezelelweyo yeflethi CH 50.--
- I-Bathrobe, i-slippers ifakiwe.
- Amaqanda oluhlu lwasimahla kwifama ekwifriji. Isonka, i-braid, ikeyiki, inyama yenkukhu kunye nenkukhu kwisikhenkcisi.
nceda uqaphele kuluhlu lwamaxabiso, hlawula ekuphumeni.
- Iimveliso ezahlukeneyo zendalo kwivenkile yasefama (i-ointments, itiye, izithelo ezomisiweyo, i-jam, isiraphu ...) NgoLwesihlanu ndibhaka kwi-oven yomlilo!